मिश्र होटल4ताराहरु
संसारमा धेरै विदेशी देशहरुमा बाँकी पहिले नै हाम्रा सँगी नागरिक गर्न परिचित छ। हुनत को विशाल लोकप्रियता, मिश्र - यी देशहरू मध्ये एक सकिन्छ मिश्रको बिदा अब शब्द को शाब्दिक अर्थमा मा विदेशी देश विचार गर्न हामीलाई अनुमति दिन्छ। एक धनी इतिहास र धेरै ऐतिहासिक स्मारक यो अद्भुत देश को एक jewel, दक्षिण मा Sharm एल शेख को रिसोर्ट छ को सिनाई प्रायद्वीप।
यो प्रायद्वीप किनभने संसारमा सबैभन्दा सुन्दर मानिन्छ जो धेरै कोरल, को लाल समुद्र घेरिएको, त्यसैले नाम छ। यो होटल मा मूल्यहरु अपेक्षाकृत साना अधिक छ, सुन्दर समुद्र छ र धनी पानी दुनिया यहाँ पर्यटकहरु आकर्षित र युरोपेली सेवा गुणस्तर, कि, एक उच्च तहमा छ।
निस्सन्देह, सबै होटल एक impeccable प्रतिष्ठा छ, तर तपाईं अग्रिम हेरविचार भने, तपाईंले एक उपयुक्त विकल्प फेला पार्न, पहिले नै मिश्र भ्रमण compatriots समीक्षा पढ्न सक्नुहुन्छ र पनि अग्रिम आरक्षण मिश्र Sharm4ताराहरु मा के होटल बारेमा छ।
Sharm एल शेख विश्वको ज्ञात पाँच-तारे होटल मा, Naama खाडी को तट मा Sharm एल माया खाडी को पुरानो शहर मा स्थित। अरबी शैली सजाया, तिनीहरूले तपाईंलाई यसको शानदार भित्री डिजाइन, सेवा गुणस्तर, खाद्य र मनोरञ्जन को एक किसिम संग मारा। यी सबै होटल एक आकस्मिक बस्ने क्षेत्रमा सांझ vacationers strolling जो मा द्वारा एकताबद्ध छन्।
तर मिश्र4तारा होटल मात्र पाँच-तारे होटल गर्न कमसल छैन, तर कहिलेकाहीं पनि केही संकेतक तिनीहरूलाई पार। भुक्तानी गर्न त कि वा छैन? मिश्र Sharm4ताराहरु मा होटल को खोज मा प्रकार, जानकारी पढ्न र एउटा कोठा बुक।
पर्यटक मुख्य प्रवाह गिरावट र हिउँदमा यहाँ सुरु - सूखी सिजन मा। यो अवधिमा तापमान 25-30 डिग्री गर्न कम छ, र 20-22 डिग्री तल पनि हिउँदमा पानी तापमान अवस्थित छैन।
धेरै होटल मिश्र4तारा लाल समुद्र को तट मा स्थित। बुटिक होटल श्रेष्ठ Iberotel Lido, Naama खाडी को किनारा मा स्थित समुद्र देखि केही मीटर छ। होटल को धेरै असामान्य वास्तु डिजाइन - यो सानो घर कोठा, दुई डेक मा अवस्थित छ जो संग तीन मंजिल्ला जहाज को रूप मा निर्माण गरिएको छ। एक एक समुद्र लाइनर को भ्रम सिर्जना गर्ने, को स्विमिंग पूल को छत मा माउन्ट।
मिश्र होटल4ताराहरु साथै पाँच-तारे रूपमा - छ उच्च अन्तमा होटल। सामान्यतया, यी होटल आफ्नै तटों, जहाँ parasols र सूर्य loungers, उदाहरणका लागि, श्रेष्ठ Iberotel Lido मा छ। धेरै होटल बच्चाहरु खेल को मैदानों, आउटडोर पूल, छोराछोरीको मिनी क्लब, बच्चा सम्भालना सेवाहरूको लागि सुसज्जित छन्।
तथापि, समीक्षा गरेर न्याय, को क्लब सधैं काम, वा काम, तर छोराछोरीलाई आफूलाई बाँकी छन्, र नर्स आउन सक्छ। तर साँझमा एनिमेटरहरु सबै हलिडे मनोरञ्जन खर्च। मिश्र4तारा होटल जिमहरू र टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स, डार्ट्स र थप - तिनीहरूले खेल मनोरञ्जन धेरै छन्।
Sharm एल शेख मा, एक पाँच तारा देखि सय बारेमा दुई अवस्थित होटल। One- र तीन-तारे होटल कम स्तर छन्। सेवा त्यहाँ पक्कै छैन उच्चतम स्तर मा, कोठा दैनिक साफ हो, तर वातानुकूलन, टिभी र सुरक्षित नि: शुल्क प्रदान। तर, सफाई चलनअनुसारको टिप छोड्ने छ।
केही होटल मिश्र3तारा यो पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। तारा होटल नाइल उपत्यका एक आदरणीय उपस्थिति, र गैर-धूम्रपान छ। जूता सफाई को लागि एक लबी अतिथि मिसिन। त्यहाँ छन् को पाठ्यक्रम, मिश्र3तारा होटल, कि फिर्ता आउन चाहेको छैन, तर यो नियम भन्दा अपवाद छ। सामान्यतया, उच्च-वर्ग होटल तिनीहरूले सेवाहरूको एक ठूलो दायरा, एक वैविध्यपूर्ण मेनु र एक निजी समुद्र तट छ कि मा प्रतिष्ठित छन्।
Ibis फुकेत काटयो3* (फुकेत, ​​थाईल्याण्ड): कोठा, सेवा, को विवरण। फुकेत मा बिदाहरू
ट्रपिकल सपनाहरु होटल अपार्टमेट्स (साइप्रस, Protaras): वर्णन, कोठा, सेवा र समीक्षा संख्या
ग्रीसमा दर्जा होटल। दर्जा ग्रीस होटल "सबै समावेशी" - 3,4र5ताराहरु
होटल Miraluna बगैचा3* (रोड्स, ग्रीस): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
Koh चांग Resort र स्पा, थाईल्याण्ड, Koh चांग: होटल को वर्णन, यात्री समीक्षा
होटल सेन्ट एलियास Resort4* (Protaras, साइप्रस) फोटो र समीक्षा
सही तीब्र सिर्जना गर्नुहोस्
कसरी लटरी मा एक लाख जीत, र मात्र
भित्री सुन्दर भान्सा: उदाहरण। सुन्दर आधुनिक भान्सा
डिसेम्बर घाम मिश्र, मौसम, को जलवायु, विशेष गरी मनोरञ्जन
जवान आमा को लागि सुझाव। बच्चा को लागि Playpen
आफ्नो बिरालो बिरालो सोधेको छ भने के गर्न
Amulets: यो के हो? मानव जीवनमा amulets र talismans को मूल्य
सपना व्याख्या: रूखहरू के सपना हो?
SQL भण्डारण प्रक्रियाहरु: सिर्जना गर्न र प्रयोग
द्वन्द्व - उद्योग को प्रकृति को एक ज्ञान: सैद्धान्तिक, लागू र सैद्धान्तिक र लागू?
मानिसहरूको रगत कोलेस्ट्रल को आदर्श। रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा को सूचक
HP PHOTOSMART C5283 - उच्च मुद्रण गुणवत्ता र कम लागत को एक उत्कृष्ट संयोजन